ဆရာတစ်ယောက်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို အရုပ်သုံးရုပ်ပြပြီး မတူညီတာတွေ ရှာဖွေဖို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အရုပ်သုံးရုပ်လုံးဟာ ပုံစံ၊ အရွယ်အစားနဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ တူညီနေပုံရှိပါတယ်။ သေသေချာချာ စစ်ဆေးကြည့်ရူ့ပြီးနောက် ကျောင်းသားဟာ အရုပ်များမှာ အပေါက်တွေကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ပထမအရုပ်မှာ နားနှစ်ဖက်လုံး အပေါက်တွေ ရှိတယ်။ ဒုတိယအရုပ်မှာ နားနဲ့ ပါးစပ်မှာ အပေါက်တွေရှိတယ်။ တတိယအရုပ်မှာ နားတစ်ဖက်တည်းသာ အပေါက်ပါရှိပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကျောင်းသားဟာ အပ်တစ်ချောင်းကို ပထမအရုပ်ရဲ့ နားတစ်ဖက်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ အပ်ဟာ အခြားနားတစ်ဖက်ကနေ ပြန်ထွက်လာတယ်။ ဒုတိယအရုပ်မှာ နားထဲ အပ်ထိုးသွင်းလိုက်တော့ ပါးစပ်ကနေ ပြန်ထွက်လာပြန်တယ်။ တတိယအရုပ်ရဲ့ နားထဲ အပ်ထိုးသွင်းလိုက်တော့ ဘယ်နေရာမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိပါဘူး။
ပထမအရုပ်က သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင်ပြောသမျှ အားလုံး နားထောင်ပေးပြီး သင့်အတွက် ထိန်းသိမ်းပေးမယ်လို့ အထင်ကြီးခံရအောင် လုပ်နေတဲ့ လူတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ သူတို့က တကယ်တော့ ဟန်ဆောင်နေကြတာပါ။ အရုပ်မှာ အပ်ဟာ အခြားနားတစ်ဖက်ကနေ ပြန်ထွက်ပေါ်လာသလိုပဲ၊ သူတို့ကလည်း သင့်စကားတွေကို နားထောင်ပေးပြီးနောက် သူတို့အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ သင့် စကားတွေကို ပြန်လည် ပြန့်ပွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင့်ကို အလေးအနက်မထားတတ်တဲ့ ဒီလိုလူစားမျိုးတွေနဲ့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ ဆင်ခြင်ပြောဆိုပါ။
ဒုတိယအရုပ်ကလည်း သင်ပြောသမျှ အရာအားလုံး နားထောင်ပေးပြီး သင့်အတွက် ထိန်းသိမ်းဆင်ခြင်ပေးမယ်လို့ အထင်ကြီးခံရအောင် လုပ်နေတဲ့ လူတွေကိုပဲ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအရုပ်မှာလည်း အပ်ဟာ ပါးစပ်ထဲက ထွက်လာတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီလူမျိုးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် သင့်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး သင့်စကားတွေကို အခြားသူတွေထံ ပြန်လည် ပြောဆိုကြပါတယ်။
တတိယအရုပ်မှာ အပ်ဟာ ဘယ်နေရာမှ ပြန်ထွက်မလာပါဘူး။ အဲဒီလူမျိုးတွေဟာ သူတို့အပေါ်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ဆက်လက်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ သင် ယုံကြည်စိတ်ချသင့်တဲ့ လူစားမျိုးတွေပါပဲ။
သင်ခန်းစာ။ ။သစ္စာရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အမြဲတမ်း အပေါင်းအသင်းလုပ်ပါ။ သင် ပြောသမျှ အားလုံး နားထောင်ပေးတတ်တဲ့ လူတိုင်းဟာ အလိုအပ်ဆုံးအချိန်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့ လူစားမျိုးဖြစ်ဖို့ကတော့ အမြဲတမ်း မသေချာပါဘူး။
Ref ;The Three Types of People by Unknown Author
Then with the help of needle the student puts the needle in the ear hole of 1st toy. The needle comes out from the other ear. In the 2nd toy, when the needle was put in ear the needle came out of mouth. And in the 3rd toy, when the needle was put in, the needle did not come out.
Posted by နေလင်းအောင် at 5:14 PM
သံယောဇဉ် တိုးပွားအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
ဘဝဆိုတာ ပဲစေ့ဘူး တစ်ဘူးလိုပါ
လက်နှစ်ဘက်မရှိသည့် အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှုး